Ra’iisul Wasaaraha oo rajo ka muujiyay in Ahlusuna qeyb ka noqdaan Maamulka Gobollada Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 17 June 2015
Ra’iisul Wasaaraha oo ku sugan Mareykanka ayaa wareysi uu siiyay Idaacada VOA waxaa uu sheegay in iyaga iyo Ahlusuna aanay cadaw isku aheyn, balse ay yihiin dad hal meel ka soo jeeda, isagoo tilmaamay inay mar kasta wax ka dhex dhici karaan.
Mar uu ka hadlayay wada hadalada ka socda Dhuusa Mareeb ayuu sheegay in Wasiirka Arrimaha Gudaha uu ku sugan yahay, isla markaana ay rajo ka qabaan in wada hadaladaas ay guul ku dhamaadaan.
“Wada hadalka ka socda Dhuusa Mareeb, waxaa rajeynaynaa inuu guul ku dhamaado, Ahlusuna qeyb ka noqoto maamulka loo dhisi doono Gobollada Dhexe, dowladda dhexe waa ka mid yihiin, waxaa dooneynaa in Ahlusuna ay dib uga gurato Dhuusa Mareeb oo ay ka baxdo, maadaama lagu wado inay noqoto Caasimadda Gobollada Dhexe”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inay socdaan dadaalo badan oo ku aadan sidii meelaha ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab laga xoreeyo, isagoo xusay inay rajeynayaan in inta aanu sanadkan dhamaan ay taas dhacdo, si degmooyinka Al-Shabaab gacantooda ku hartay looga saaro, looguna diyaariyo in doorashooyin ka dhacaan sanadka 2016 sida uu yiri.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dhaqaalihii ay ka filayeen deeq bixiyeyaasha aanu ka imaan, taasna ay keentay dib u dhaca ku yimid mushaaraadkii shaqaalaha dowladda iyo ciidamada.
Hadalkan ka soo yeeray Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku soo aadaya, iyadoo habeenkii labaad uu ku hoyday Dhuusa Mareeb wafdi uu hogaaminayay Wasiirka Arrimaha Gudaha, kuwaasoo wada hadalo ay la lahaayeen Mas’uuliyiinta Ahlusuna, iyadoo wada hadalada wali la isku mari la’yahay.